8 အဆင့် 12V 20A အလိုအလျောက်လီသီယမ် LiFePO4 ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Ligao
8 အဆင့် 12V 20A အလိုအလျောက်လီသီယမ် LiFePO4 ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ
ITEM ခု NO: LBC 1220
• Switchmode နည်းပညာ: ဟုတ်ကဲ့
• Polarized ကာကွယ်မှု: ဟုတ်ကဲ့
• Output တိုတောင်းသောကာကွယ်မှု: ဟုတ်ကဲ့
•မဟုတ်သောဘက်ထရီ link ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း: ဟုတ်ကဲ့
• Input အားဗို့: 220-240V AC အ, 50 / 60Hz / 110V AC အ, 50 / 60Hz ။
• Input ကိုပါဝါ: 554W
•အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် output ကို: 12V DC က, 20A
• 8 အဆင့်နေသောခေါင်းစဉ်: ဖျ Start ကို, အစုလိုက်, Absorption, Analyze, ပြီးစီး, လုပျသငျ, Float လုပ်မလဲပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပါ။
ဘက်ထရီ၏•အမျိုးအစားများ: 12V lithium-ion LiFePO4 ဘက်ထရီ
• Thermal Protect (ပေါ်ပန်ကာ): 65 ℃ +/-5℃။
•စွမ်းရည်: App ကို။ 85% ။
•ကိုက်ညီစံချိန်စံညွှန်းများ: သမဝါယမ, အီး, IEC60335, EN61000, EN55014
• Dimension (L ကို× W × H ကို): 217 × 116 × 62mm
output က Short ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
non ဘက်ထရီ Link ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ဤသည် 8 တာဝန်ခံအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအပြည့်အဝအလိုအလျှောက်လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းသည်။
8-ဇာတ်စင်အားသွင်းစဉ်အလာအားသွင်း အသုံးပြု. နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသင်၏ဘက်ထရီကြာကြာအသက်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးတစ်ဦးအလွန်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိကျမှုအားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
8-ဇာတ်စင်အားသွင်းမှသာ LiFePO4 နည်းပညာကို အသုံးပြု. lithium-ion ဘက်ထရီများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
step1 ။ soft Start ကို
အဆင့်2အစုလိုက်
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 90% ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည်အထိအများဆုံးလက်ရှိနှင့်အတူအားသွင်း။
အဆိုပါအားသွင်းသံသရာများအတွက် bulk mode ကို။ ဘက်ထရီရဲ့ Terminal ကိုဗို့အားအမြောက်အများအားသွင်းဖို့ charger ကို switches များညွှန်ရာမှာ set ကိုကန့်သတ်, အထက်ထမြောက်တော်မူပြီသည်အထိစတင်အဆင့်နေဆဲဖြစ်သည်။
terminal ကိုဗို့အားအချိန်ကိုကန့်သတ်အတွင်းဗို့အားကန့်သတ်လွန်မမူလျှင်, အမှား mode ကိုရန် charger ကိုခလုတ် (အစိုင်အခဲအဆင့်2ဆီမီးခွက်) နှင့်အားသွင်း discontinues ။ ဒီတော့လျှင်, ဘက်ထရီပျက်ယွင်းနေဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ယင်း၏စွမ်းရည်ကြီးမားလွန်းသည်။
အဆင့်3Absorption
အဆင့်4Analyze ။
အဆင့်5ပြီးစီး
အဆင့်6အကျယ်ချဲ့
အဆင့်7Float
အဆိုပါ Float ဇာတ်စင်ဘက်ထရီ overcharging သို့မဟုတ်မထိခိုက်စေဘဲ 100% ဘက်ထရီအားသွင်းမှာဘက်ထရီထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါက charger ကိုသတ်မရှိဘက်ထရီနဲ့ချိတ်ဆက် left နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
အဆင့် 8 ကိုထိန်းသိမ်းရန်
95% -100% စွမ်းရည်မှာဘက်ထရီထိန်းသိမ်းခြင်း။ အဆိုပါအားသွင်းဘက်ထရီဗို့အားစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဘက်ထရီအပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆိုထားရန်လာသောအခါလိုအပ်သောတစ်ဦးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပေးသည်။
12 အလိုအလြောကျ lithium ဘက်ထရီ charger တစ်ခု 8 ခြေလှမ်းအပြည့်အဝအလိုအလျှောက်အားသွင်းသံသရာရှိပါတယ်။ အဆိုပါအားသွင်းအလိုအလျှောက်ပြန်လည်အားသွင်းကွေး၏အစမှတတ်၏။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အမျိုးအစား, LBC-တာဝန်ခံကစွန့်ခွာ။ ပညာရှင်များအဘို့ပါဝါကို။
Excellent က Pre-အရောင်းနှင့်ပြီးတဲ့နောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုစနစ်။
1986 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ဌ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးပြုတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူ။
Zhongshan တရုတ်နိုင်ငံဌအသက် 30 နှစ်အရွယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
ဌကုန်ပစ္စည်း Range: ပါဝါ Invertor, Automantic ဗို့အား Regulator, ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ, Converter နှင့်နေရောင်ခြည်ပြောင်းလဲခြင်း Controller ။
ဌလက်မှတ်: က ISO 9001-2015, GS လက်မှတ်, သမဝါယမလက်မှတ်, etc
ယခင်: 8 အဆင့် 12V 20A အလိုအလျောက်လီသီယမ် LiFePO4 ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ
နောက်တစ်ခု: 8 Stage Automatic 12V 20A lithium LiFePO4 Battery Charger
12 Volt ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ
12V 24v Automotive ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ
12V 24v ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ
ဒီဇယ် Generator ကိုဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ
အက်ဆစ်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ 12V ဦးဆောင်လမ်းပြ
Qc3.0 မော်တော်ကားဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ Cable ကို
DC က, DC & MPPT နေရောင်ခြည်အားသွင်းကိရိယာ 25Amp ။